पहिरनमाथि वर्षाको ट्रोल किन ? फोटो-फिचर | Saurahaonline.com
पहिरनमाथि वर्षाको ट्रोल किन ? फोटो-फिचर
चितवन, २२ जेठ । अहिले अभिनेत्री वर्षा राउतको पहिरनले सामाजिक संजाल गर्माएको छ । अष्ट्रेलियामा आफ्नो फिल्म ‘जात्रै जात्रा’को प्रदर्शनका लागि पुगेकी वर्षाले त्यहाँको केही तस्विरहरु सार्वजनिक गरिन् । उक्त तस्विरमा वर्षा केही हदसम्म खुलेकी छिन् ।